हेर्नुस्, कुन नेताका घरमा कति सुरक्षाकर्मी छन्! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
हेर्नुस्, कुन नेताका घरमा कति सुरक्षाकर्मी छन्!
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भीआईपीले अझै घरमा मनपर्दी ढंगले दर्जनांै सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । सरकारले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिविपरीत हुने गरी पूर्वभीआईपीले सशस्त्र प्रहरीका दर्जनौं सुरक्षाकर्मीलाई घरको सुरक्षामा राखेका हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रहरीका पूर्व तथा बहालवाला उच्च अधिकारीले पनि आफ्नो आवासमा दर्जनांै सुरक्षाकर्मी राखिरहेका छन् । प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीले आवासमा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लगाउने गरेको गृहका अधिकारीको दाबी छ ।